Mateo Asɛmpa No 18:1-35
Nea ɔyɛ kɛse wɔ Ahenni no mu (1-6)
Nguan a wɔayera ho mfatoho no (12-14)
Sɛnea wubenya wo nua (15-20)
Akoa a wamfa ankyɛ ho mfatoho no (21-35)
18 Saa bere no, asuafo no baa Yesu nkyɛn bebisae sɛ: “Hena paa na ɔyɛ kɛse wɔ ɔsoro Ahenni no mu?”+ 2 Enti ɔfrɛɛ abofra kumaa bi, na ɔde no gyinaa wɔn mfinimfini. 3 Ɛnna ɔkae sɛ: “Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, sɛ moansakra* anyɛ sɛ mmofra nkumaa+ a, morenkɔ ɔsoro Ahenni no mu da.+ 4 Enti obiara a ɔbɛbrɛ ne ho ase te sɛ abofra kumaa yi no, ɔno na ɔyɛ kɛse wɔ ɔsoro Ahenni no mu,+ 5 na obiara a obegye abofra kumaa a ɔte sɛɛ me din mu no, na wagye me nso. 6 Nanso obiara a ɔbɛto nkumaa a wɔwɔ me mu gyidi yi mu baako hintidua no, anka eye ma no mmom sɛ wɔde ɔbo kɛse* a afurum twe bɛsɛn ne kɔn mu, na wɔde no akɔto ɛpo mfinimfini.+ 7 “Wiase nnue esiane hintidua nti! Nokwarem no, sɛnea ɛte biara hintidua bɛba, nanso onipa a hintidua nam no so ba no nnue! 8 Enti sɛ wo nsa anaa wo nan to wo hintidua a, twa fi hɔ na tow kyene.+ Eye ma wo sɛ wubedi dɛm anaa wobɛyɛ apakye de akɔ nkwa mu sen sɛ wowɔ nsa abien ne nan abien na wɔbɛtow wo ato daa ogya mu.+ 9 Afei nso, sɛ w’aniwa to wo hintidua a, tu fi hɔ na tow kyene. Eye sɛ wode aniwa baako bɛkɔ nkwa mu sen sɛ wowɔ aniwa abien na wɔbɛtow wo ato Gehenna*+ gya mu. 10 Monhwɛ na moammu nkumaa yi mu baako animtiaa, na mereka akyerɛ mo sɛ, wɔn abɔfo a wɔwɔ soro no hu m’Agya a ɔwɔ soro no anim daa.+ 11 *—— 12 “Mudwen ho dɛn? Sɛ obi wɔ nguan 100 na emu baako yera a,+ ɔrennyaw 99 no wɔ bepɔw so nkɔhwehwɛ nea wayera no anaa?+ 13 Na sɛ ohu no a, nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, odi ne ho ahurusi sen 99 a wɔnyerae no. 14 Saa ara nso na m’Agya* a ɔwɔ soro no ani nnye ho sɛ nkumaa yi mu baako mpo bɛyera.+ 15 “Bio nso, sɛ wo nua yɛ wo bɔne a, kɔ ne nkyɛn na ma onhu ne mfomso,* wo ne ɔno nko ara ntam.+ Sɛ otie wo a, woanya wo nua.+ 16 Na sɛ wantie a, fa onipa baako anaa nnipa baanu ka wo ho, na ama asɛm biara agyina adansefo baanu anaa baasa adanse* so.+ 17 Sɛ wantie wɔn a, ka kyerɛ asafo no. Sɛ wantie asafo no nso a, ɛnde bu no sɛ amanaman muni+ anaa obi a ogyigye tow.+ 18 “Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, biribiara a mobɛkyekyere wɔ asaase so no, ɛbɛyɛ nea wɔakyekyere wɔ soro dedaw, na biribiara a mobɛsan wɔ asaase so no, ɛbɛyɛ nea wɔasan wɔ soro dedaw. 19 Nokwarem mereka akyerɛ mo bio sɛ, sɛ mo mu baanu pene so wɔ asaase so sɛ wobebisa biribiara a ɛho hia a, m’Agya a ɔwɔ soro no bɛyɛ ama wɔn.+ 20 Na baabi a baanu anaa baasa ahyiam me din mu+ no, na mewɔ wɔn mfinimfini.” 21 Ɛnna Petro bebisaa no sɛ: “Awurade, mpɛn ahe na sɛ me nua yɛ me bɔne a, ɛsɛ sɛ mede kyɛ no? Enkosi mpɛn ason anaa?” 22 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Mereka akyerɛ wo sɛ, ɛnyɛ mpɛn ason, na mmom enkosi mpɛn 77.+ 23 “Ɛno nti, ɔsoro Ahenni te sɛ ɔhene bi a na ɔpɛ sɛ ɔne ne nkoa bu akontaa. 24 Bere a ofii ase sɛ ɔne wɔn rebu akontaa no, wɔde ɔbarima bi bae a ɔde no ka dwetikɛse 10,000.* 25 Nanso esiane sɛ onni nea ɔde betua ka no nti, ne wura no kae sɛ wɔntɔn ɔne ne yere ne ne mma ne nea ɔwɔ nyinaa mfa ntua ka no.+ 26 Enti akoa no kotow n’anim, na ɔsrɛɛ no sɛ, ‘Nya abotare ma me, na metua ne nyinaa ama wo.’ 27 Asɛm no yɛɛ akoa no wura no mmɔbɔ, na ogyaa no, na ɔde ɛka a ɔde no kyɛɛ no.+ 28 Ɛnna saa akoa no puei, na okohuu ne yɔnko akoa bi a ɔno nso de no ka denare 100,* na ɔyeree no, na ofii ase miaa ne mene* kae sɛ, ‘Tua ɛka a wode nyinaa.’ 29 Enti ne yɔnko akoa no kotow n’anim, na ofii ase srɛɛ no sɛ, ‘Nya abotare ma me, na metua wo ka.’ 30 Nanso wampene, na mmom ɔma wɔde no kɔtoo afiase kosi sɛ obetua ɛka a ɔde no. 31 Bere a ne mfɛfo nkoa no huu nea asi no, wɔn werɛ howee paa, na wɔkɔkaa nea asi no nyinaa kyerɛɛ wɔn wura no. 32 Ɛnna ne wura no frɛɛ no ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Akoa bɔne, bere a wosrɛɛ me no, mede ka no nyinaa kyɛɛ wo. 33 Ɛnsɛ sɛ anka wo nso wuhu wo yɔnko akoa no mmɔbɔ sɛnea mihuu wo mmɔbɔ no anaa?’+ 34 Ɛnna ne wura no bo fuwii, na ɔde no hyɛɛ wɔn a wɔhwɛ afiase hɔ no nsa, kosi sɛ obetua ka biara a ɔde. 35 Saa ara na mo nso, sɛ moamfi mo komam amfa ankyɛ mo nuanom+ a, me soro Agya ne mo bedi.”+
^ Anaa “moannan.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “mo Agya.”
^ Nt., “kɔ na kɔkasa kyerɛ no.”
^ Ná dwetɛ dwetikɛse 10,000 yɛ denare 60,000,000. Hwɛ Nkh. B14.
^ Anaa “ne kɔn.”